Gaadiidka - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Waxaa naga go'an inaan siino khibrad nabdoon ardayda raacda basaska iskuulka degmada.
Maalinta ardaydaadu waxay ka bilaabmaysaa safarkooda dugsiga. Macluumaadka jadwalka baska dugsiga waxaa si joogto ah loogu soo diraa qoysaska ku nool Dugsiga Aagga Robbinsdale ka hor maalinta koowaad ee dugsiga. Ardayda uqalma fasalada K-12 waxay helayaan kaarka boostada oo ay kujiraan lambarka baska ardayga, goobta laga qaadayo iyo waqtiyada laqaadayo / laga baxayo. Haddii ardaygaagu bas ka raaco meel aan ahayn cinwaankiisa ama gurigeeda (sida goobta xannaano-maalmeedka), waxaad u baahan tahay inaad u sheegto dugsiga ardaygaaga si habayn loogu sameeyo gaadiidka baska.
Degmadu waxay mas'uul ka tahay ardayda baska raacaya. Haddii aadan kaar ku helin boosta ka hor maalinta koowaad ee dugsiga, 1) waxaad ku nooshahay aagga lugaynta ee dugsiga aaggaaga, 2) ilmahaagu wuxuu dhigtaa dugsi ku yaal degmada oo ka baxsan aagga aad dhigato iyo maahan magnet iskuul, ama 3) waxaad heysataa arday dugsiga sare dhigta oo u socdaalaya kana tagaya iskuul isaga oo adeegsanaya qaab madaxbanaan waxaadna ka gaabsatay gaadiidka degmada. Kaliya ardayda xaq u leh gaadiidka baska ee dugsiga ay dhiganayaan ayaa awoodi doona inay baska u raacaan dugsigaas.
Macluumaadka gaadiidka sidoo kale waxaa laga heli karaa Xarunta Infinite. Riix halkan si ay helaan ama saxiixdo waynyahay Campus.
Riix halkan si aad u aragto video tutorial kooban ah oo ku saabsan sida aad u aragto macluumaadka gaadiidka ardaygaaga in account portal waalidka aad.
La xiriir Gaadiidka
Xulashada 1: Basaska soo daahay, waxyaabaha maqan
Xulashada 2aad: Waaxda marinka
Xulashada 3aad: Waxbarashada Gaarka ah
Si aad u cusbooneysiiso cinwaankaaga, fadlan ka wac Xarunteena Diiwaangelinta 763-504-8080.
Jidka Basaska iyo Macluumaadka Gaadiidka
Codsiga Beddelka Baska
Fogaanta Socodka iyo Qariiradaha Xuduudaha
Macluumaadka jadwalka basaska waxaa loo diraa qoysaska ku nool xaafada Iskuulka Robbinsdale ka hor maalinta koowaad ee iskuulka.
Ardayda u-qalanta ee fasalada K-12 waxay ku helaan kaarka boostada boosta lambarka baska ardayga, goobta laga qaadayo iyo wakhtiyada la qaadanayo / la dejinayo.
Haddii aadan kaar ku helin boosta kahor maalinta koowaad ee dugsiga,
waxaa laga yaabaa inaad ku nooshahay aaga lugaynta ee dugsiga aagaaga ku yaal;
ardaygaagu dhigto dugsi ku yaal degmada oo ka baxsan aagga aad ka qayb gasho (oo aan ahayn dugsiga birlabta) sidaa darteedna waxaad mas'uul ka tahay gaadiidka;
waxaad haysataa arday dugsi sare ah oo u socdaalaya kana soo galaya iskuulka qaab madaxbanaan waxaadna ka gaabsatay gaadiidka degmada.
Haddii ardaygaagu u baahan yahay inuu bas ku raaco meel aan ahayn cinwaanka gurigiisa (sida goobta xannaano-maalmeedka), fadlan la socodsii dugsiga ardaygaaga.
Sida loo arko macluumaadka marinka baska ee Infinite Campus
Haddii aad jeceshahay inaad sameyso codsi inaad ku bedesho joogsiga baska ardaygaaga, fadlan marka hore akhri macluumaadka soo socda ka dibna dhammaystir macluumaadka hoose.
Basasku uma safri doonaan meelaha loo yaqaan 'cul-de-sacs', waddooyinka geerida ku dhammaada ama meelaha kale ee aanu darawalku si badbaado leh ugu dhaqaajin karin baska. Inta badan waddooyinka gaarka loo leeyahay sidoo kale waa laga reebay (tusaale ahaan guryaha guryaha ku yaal iyo ururada guryaha). Wadooyinkan caadi ahaan looma dhisin heer isku mid ah wadada dadweynaha. Arrimaha sida culeyska gaariga, ballaca wadada, ciriiriga, nadiifinta barafka, iwm, ayaa ka hortagaya isticmaalkooda. Marka laga reebo tan waxay noqon kartaa baska ku qaada ardayda naafada ah nidaamkayaga waxbarashada gaarka ah. Dhammaan ardayda, iyadoon loo eegin da'da ama fasalka deggan meelahaas waxay u baahan doonaan inay lugeeyaan joogsiga baska ee loo qoondeeyey iyadoon loo eegin fogaanta.
Helitaanka waddooyinka hareeraha kama mid aha shuruudaha loo adeegsado aasaasidda joogsiyada basaska. Inta badan aagga kaqeybgalka Degmada Dugsiga Robbinsdale waxaa loogu talagalay iyada oo aan laamiyada marin.
Basasku waxay arday walba u wataan guryahooda maalin kasta. Baska ku socda ma dammaanad qaadayo ku darista / beddelka joogsiga baska. Muuqashada laga bilaabo guriga ilaa joogsiga baska ayaan qeyb ka aheyn shuruudaha aan ku aasaasaneyno joogsiga basaska. Joogsiga basaska ayaa ah meelaha laga ururiyo xaafadaha. Istaatijiyad ahaan, joogsiyada basaska ayaa ka amaan roon geeska marka loo eego gurigaaga hortiisa. Joogsashada guryuhu ma aha oo keliya mid amnigeeda ka yar, si fududna uguma ooln howlaha basaska caadiga ah. Mar labaad, nidaamkayaga waxbarasho ee gaarka ah ayaa ka reebi lahaa. Waxaan si xoog leh ugu dhiirigalinaynaa qoysaska inay la socdaan oo ay kormeeraan ardaydooda barta basaska laga raaco iyo sidoo kale inay ardaydooda kula kulmaan goobta basku istaago.
Ma awoodno inaanu dhisno joogsiyo ku saleysan duruufaha shaqsiyadeed sida shaqada, xanaano maalmeedka, walaalaha ama xaaladaha caafimaad ee xubin kale oo qoyska ka mid ah.
Gaadiidka Xanaanada / Xannaano-maalmeedka
Si loo hubiyo amniga ardaydayada da'da yar, fadlan la soco nidaamka soo socda ee ardayda dugsiga barbaarinta.
Ardaydu waa inay xirtaan astaamaha basaska ee ay ku qoran yihiin magacyadooda iyo inay saxaan macluumaadka ka degida maalin walba sanadka oo dhan. Waxaa lagugula talinayaa ardayda inay xirtaan sumadda baska oo ay haystaan nuqul ka mid ah calaamada oo ku lifaaqan boorsadooda.
Ardayda dugsiga barbaarinta waxaa looga baahan yahay inay fadhiistaan kuraasta hore ee baska.
Ardayda dugsiga barbaarinta waa inay raacaan barta baska laga raaco iyo marka laga dejinayo labadaba qof weyn oo loogu talagalay. Mudnaanta raacitaanka baska ayaa khatar geli doonta haddii tan la raaci waayo.
Haddii uusan joogin qof joogsada baska inuu la kulmo ardayga, darawalku wuxuu sii wadi doonaa ardayga oo wuxuu sameyn doonaa isku day labaad oo ah inuu ka dago, wuxuuna sidoo kale la xiriiri doonaa dirista wixii tilmaamo dheeraad ah.
Haddii aad ku nooshahay "aagga lugaynta," ardaygaaga lama siin doono gaadiid bas; ardaygaaga waxaa laga rabaa inuu yeesho qof weyn oo u kaxeeya kana soo qaada dugsiga.
Carruurta dugsiga barbaarinta waa in laga soo qaadaa oo la dhigaa isla goobta maalin kasta.
Si aad xaq ugu yeelatid baska ama ka-soo-noqoshada xanaano-maalmeedka, xannaano-maalmeedka ardaygaagu waa inuu ku dhex jiraa aagga ka-qaybgalka ee dugsigaaga.
Qoysaskaas ay ardaydoodu dhigtaan daryeelka kahor ama kadib dugsiga ee YMCA ee 42nd Avenue ee New Hope, baska waxaa loo heli karaa oo keliya Sonnesyn, RSI, SEA iyo FAIR School Crystal.
Gaadiidka Dugsiga Magnet
Gaadiidka baska ayaa la siiyaa ardayda ka diiwaangashan Robbinsdale Spanish Immersion School, Iskuulka Injineerinka iyo Farshaxanka, FAIR School Pilgrim Lane, FAIR School Crystal iyo Spanish Immersion magnet program Plymouth Middle School.